Maitiro ekuteerera kune Youtube nziyo neiyo iPhone skrini yadzimwa | IPhone nhau
Maitiro ekuteerera kune Youtube nziyo neiyo iPhone skrini yadzimwa
Mumwe wemibvunzo yatinogara tichizvibvunza kuti sei isu tisingakwanise teerera kuYouTube mumhanzi kumashure pane yedu iPhone. Ichi chinhu chakakosha kune vashandisi vazhinji kubvira iko kuri nyore kudzima iyo skrini uye kuramba uchiteerera kumimhanzi yedu yatinofarira pasocial network chinhu chinogona kuitwa munguva yakapfuura.
Nhasi ticharatidza zvishoma "hunyengeri" kuti tigone teerera kune Youtube nziyo neiyo iPhone skrini yakadzimwa uye chishandiso chakakiiwa zvachose. Izvi zvinogona zvakare kuitwa pane iyo iPad, sezvo iri imwecheteyo inoshanda sisitimu.
Nei zvisingatenderwe kuteerera kuYouTube mavhidhiyo kumashure?
Zvakanaka, mhinduro kumubvunzo uyu yakapusa sekutaura kuti chavari kuda ndechekuti iwe ubhadhare icho. Ehe, YouTube Red yekubhadhara sevhisi, inobvumira vashandisi kuita chiito ichi chekugona kudzima iyo iPhone kana iPad uye nekuenderera mberi nekuteerera kumimhanzi, tichaona sarudzo irikushanda parizvino uye isingade chero muripo.
Izvi zvakafanana nekutora mavhidhiyo eYouTube kana odhiyo mu mp3, Pane sarudzo pane izvi asi hadzisi dzakanyanya kuita, tichazoda matanho mashoma ekuita chiito. Saka hatisi kuzozvivaraidza futi uye tinoenda nazvo. Matanho ari nyore, asi iwe unofanirwa kuzviita seizvi:
Isu tinovhura Youtube mune Safari browser yeiyo iPhone kana iPad
Dzvanya kumusoro kuruboshwe "Aa" uye isa desktop desktop
Isu tinotsvaga rwiyo uye tinotanga kuriridza pa iPhone
Isu tinokiya iyo iPhone uye kana ikamira, isu tinoshandisa iyo skrini zvakare ndokurova bhatani rekutamba
Mimhanzi ichatanga kutamba kumashure
Iyi sarudzo ine zvinokanganisa zvinoverengeka sezvo tisingakwanise kupfuudza yeYouTube vhidhiyo kushambadza, asi zvirinani kuti tinogona kuteerera kumumhanzi kumashure. Haisi iyo iyo iri nzira isinganzwisisike uye yakapusa pasi rose asi haina kuomarara chero. Kune rimwe divi, mune yangu kesi, ini handisi mune beta vhezheni yeIOS, yangu iPhone ine iOS 13.6 yakaiswa. Iwe unogona kunge uchitoziva nezve iyi sarudzo asi igovana iyo kune avo vasingazvizive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuteerera kune Youtube nziyo neiyo iPhone skrini yadzimwa
Hongu unogona… vhura YouTube neSafari uye isa mumodhiyodhi yekutarisa. Iye zvino unogona kukiya iPhone uye rova ​​iyo control Center play. Hapana chikonzero chekutora chero chinhu ...
Jose Hidalgo akadaro
Iwe unogona ikozvino kurodha mimhanzi yeYouTube mahara uye kugona kuzviita
Pindura José Hidalgo
Chokwadi ndechekuti ndakazviedza kamwechete uye mushure mekuzviitazve, ndakakwanisa. Yakasimbiswa. Chii chimwe, iwe unogona kutenderera nekungwarira mamwe maficha pane chishandiso. Mazvita iphoneros shamwari. ☺️
Sekureva kwaDigiTimes, iyo iPhone 12 ichaunzwa munaGunyana
Qualcomm Quick Charge 5 inobvumidza yakazara 4.500 mAh bhatiri kubhadhariswa mumaminetsi gumi nemashanu